Wedding ingenye izenzakalo ezivusa amadlingozi kakhulu futhi kulindelwe kakhulu ekuphileni. Lokhu isifiso enganginaso kusukela ebuntwaneni wabo bonke amantombazane kanye nabantu abasha, zicabanga abakhethiweyo bayo esizayo. Futhi, ngokwemvelo, zonke zangaphambi uhlelo yonke imininingwane emshadweni wabo. Futhi kulolu suku fabulous ngihlale ngifuna izinto sifane emaphusheni ami. Umakoti sezinzwa ngoba every little thing, umkhwenyana namanje ophikayo futhi lamema bahlushwe umbuzo ukuthi abashadayo ujabulele isipho lwabo lomshado.
Lesi sihloko Sizokwenza isihloko izipho. Lapha uzothola amathiphu awusizo kanye nezeluleko.
Kusukela ekuqaleni, ngokukhetha isipho umshado, kufanele sikhumbule ukuthi iholidi hhayi owodwa kodwa washo emibili abantu, iholidi lomkhaya entsha, ngakho musa ukuthenga lutho nje umakoti nomkhwenyana kuphela. Kulokhu, ekahle ekhaya Imishini. Lokhu kuzokwandisa ukusiza womkhaya osemncane, futhi mhlawumbe uzokhumbula ukumbonga nsuku zonke. Ngakho-ke kuyoba, isibonelo, uma unganqotshwa umakoti nomkhwenyana umshini wokuwasha noma microwave. Kodwa uma imali akwanele, ungakwazi ukuthenga okusansimbi noma a blender.
Njengesipho lomshado ongakunika nalokho ezinye izitsha. Ngakho, uma ungazazi lezi zilimi, ukuchitha imali eningi, ungakwazi ukuthenga esitolo iqoqo izinkomishi ezimbili, okuyinto ndawonye bakha inhliziyo noma nje ngokuphelele. Angiyithandi umbono izitsha? Isipho amathawula anamagama abantu abasanda kushada noma bathrobes. Nokho, ngokuvamile, yebo, okungcono lomshado isipho - imali.
Uma umakoti - bukadadewenu, ke lapho okudingeka ukuthi kube indlela ekhethekile. Yiqiniso, uyazi ukunambitheka kwakhe ukuthi yena uthanda, lokho imimoya ukhetha, lokho izimonyo, izingubo zangaphansi nokunye. D. Noma kunjalo, konke lokhu kungaba imnike ngosuku lwakhe lokuzalwa. Isipho lomshado kadadewethu kufanele kube yasekuqaleni futhi eyingqayizivele.
Okokuqala udinga ukuthatha inothi ukuthi lo dade ungcono ukunikeza isipho izinsuku ezimbalwa ngaphambi komshado. Kungaba ukushaywa SPA-salon, services ukukhokhelwa wezinwele noma artist enze-up. Khumbula ukuthi okwamanje kufanele ngokukhululekile ukuthi uyazithanda futhi anakekele umuntu amthandayo, ngakho-ke, njengesipho lomshado kadadewethu, ukuphelela ukuba wamukeleke, iqembu bachelorette ihlelwe nguwe. Cabanga uhlu lwezivakashi, ngahlangatshezwa ukudla ezinye iziphuzo kuyoba osemcimbini, nabangane abaseduze nodadewabo uhlele ngimnikeze sikhumbuleke futhi yasekuqaleni Pajama party. Yiqiniso, Ungeqisi it. Akufanele ngokuthi i stripper, kuzuba aphume ikhekhe, awufani udadewethu.
Uma ungenalo isikhathi ukuhlela iholide, ukunika udadewethu wakhe isithombe Uhlaka sedijithali zezingane zakho, futhi intsha izithombe. Ngokuqinisekile, inkumbulo izinsuku merry yobuntwana intsha kuyisipho kangcono wakhe.
Uma umenywe umhlengikazi ukugujwa noma omunye umuntu eduze nawe, khona-ke ngokuqinisekile kwakungeke kube kangcono isipho lomshado ngezandla zabo. Cabanga ngakho konke ziyazithanda njengoba ingane - .. Painting, efekethisiwe, appliqué, njll Jikela umcabango uhambe!
Abalandeli kapende, ungenza umnikelo kulandela isipho yasekuqaleni: kufanele uchaze futhi ukudweba nail ngaphezu kwazo kanye nemibuthano ezakha linye. Musa umcondvo mug ke ungakwazi ukupenda emathileyi, elinemishwe, ekhishini izitsha, njll
Awazi kanjani ukudweba kanye enizithandayo - lokuthunga? Khona-ke thunga abasha amashidi, ekhishini amathawula, plaid enhle ngezithombe zabo, imicamelo kanye nokunye. D. Ngokuqinisekile laba abashadayo kuyoba nice ukuthola isipho for the wedding into enjalo, lapho imali yomshikashika wabo futhi ingxenye umphefumulo wakhe.
Yiqiniso, lapho beshada ukhethe nhlobo lula. Nokho, kungakhathaliseki indlela okungaba usizo kwakungeyona, khumbula ukuthi kufanele akhipha ukunakekelwa, ukunakekela nentshisakalo umkhaya omusha abasha. Akubalulekile ukuba ninikela okweshumi itiye isethi noma yensimbi yesihlanu. Kuyadingeka ukuba bacabange ngalokho uhlobo isipho wedding abasha kuyoba mnandi ukuba uthole.
Indlela yokwenza i sipho enhle?
Funny ubhontshisi emshadweni kubangani
Yini okufanele ibe ngumfakazi emshadweni
Ethmoiditis - Izimpawu kanye Ukwelashwa. Ethmoiditis - ukwelashwa ekhaya
Stopproblem (ukugqiba ipensela): Izibuyekezo
Engemuva-wheel drive noma phambi? Yini ukushayela imoto kungcono?
Izindandatho-Olympic makuqoqwe izizwe kanye amazwekazi
Isinkwa, ukolo: ikhalori, okuyinto engcono ukukhetha
Indlela ukuxhuma kwi "MegaFon" iphakethe-SMS? Yini amaphakheji zinikezwa opharetha?
Umgadli French Saa Lui
Indlela aphendule izincomo?
Flemoksin izingane: indlela yokwenza?
Inkukhu nge ithanga: isidlo esimnandi eyodla